नेतृत्वकर्ताहरुमा गम्भिर ध्यान जाओस् « Aarthik Sanjal नेतृत्वकर्ताहरुमा गम्भिर ध्यान जाओस् – Aarthik Sanjal
नेतृत्वकर्ताहरुमा गम्भिर ध्यान जाओस्
१५ चैत्र २०७६, शनिबार १३:४६
काठमाडौं । मुलुकमात्र होइन संसार आजित छ कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट । यही संक्रमणले मुलुक लकडाउनको पाचौं दिनमा रहेको छ । हाम्रै सुरक्षाका खातिर नेपाल प्रहरी ,सशस्त्र प्रहरी ,नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा कर्मी सडकमा खटिएका छन् ।
त्यसैगरि खटिएका छन् स्वास्थ्यकर्मीहरु यस्तो अवस्थामा सरकारले राहतका लागि केहि न केहि घोषणा गर्नु पर्यो । तत्काल केही राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्यो ।
सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु विहानदेखि सडकमा उभिदा पानी समेत अर्काको आश गर्नु पर्ने यो कस्तो विडम्वना ? सर्वसाधारणहरुले दया र करुणाले दिएको पानी, चाउचाउ, बिस्कुट खाएर दिनभर सुरक्षा गर्नु पर्ने ?
यो अती भयो सरकार कम्तीमा सुरक्षामा खटिएकालाई पानी र खाजाको सहज ब्यवस्थापन होस् । सरकार अफ्ठारो र असहज परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मनोबल बढाउने काम भएन भने निरासा मौलाउदै जानेछ । समयमै ध्यान जाओस् । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी पिपिईको व्यवस्था गरियोस् हार्दिक अनुरोध छ ।